बीबीसी - राजधानी - किन लाखौं चिनियाँ पुरुषहरु रहन एकल
बीबीसी — राजधानी — किन लाखौं चिनियाँ पुरुषहरु रहन एकल
चीन मा, त्यहाँ एक नाम लागि अविवाहित मानिसहरू भन्दा । शेंग नेन, अर्थ बाँकी पुरुष छन् पाउन अझै एक पत्नी र एक देश मा एक बढ्दै लिङ्ग खाली छ, एक ठूलो समस्या छ । चीन धेरै लाखौं महिला भन्दा पुरुष, एक देश को चीनको एक-बच्चा नीति, जो पल्टाइदिनुभयो थियो, यद्यपि यसको प्रभाव हुनेछ अन्तिम दशक बढी छ । लिङ्ग असंतुलन छ, यसलाई बनाउन लागि कडा धेरै मानिसहरू एक साथी पाउन र यो खाली गर्न संभावना छ, ठूला मनका होओ गर्न । द्वारा, यसको हुनेछ अनुमान लाख महिला भन्दा पुरुष लागि देख एक साथी छ । आफ्नो पुस्तक मा, डेमोग्राफिक भविष्य, अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री निकोलस शहर अनुमान द्वारा, एक चौथाई भन्दा बढी चिनियाँ मानिसहरू आफ्नो छैन हुनेछ विवाह । अब, टाढा कम महिला भन्दा पुरुष, दौड, एक उपयुक्त साथी पाउन र उनको जीत भन्दा पहिले अरू कसैले गर्छ नेतृत्व छ, केही मानिसहरू जान गर्न ठूलो लम्बाइहरू गर्न एक पत्नी पाउन. तिनीहरूले छौं खर्च विशाल मा रचनात्मक, कहिलेकाहीं असफल, उपाय जीत एक महिला । मा, एक चिनियाँ व्यवसायी मा आफ्नो एक संघाई आधारित भूमिका एजेन्सी को लागि असफल गर्न उहाँलाई पाउन एक पत्नी, भुक्तानी भएको कम्पनी मिलियन युआन (डलर) सञ्चालन गर्न एक व्यापक खोज । अर्को मामला मा, एक कम्प्युटर प्रोग्रामर देखि गुआंगजौ दक्षिणी शहर किनेको को भाग रूपमा एक विस्तृत विवाह प्रस्ताव गर्न आफ्नो प्रेमिका । दुर्भाग्यवश, उहाँले तल फर्केर थियो, आफ्नो रूपमा घटना को फोटो थिए व्यापक साझा मार्फत सामाजिक मिडिया. समस्या को भाग हो भनेर पुरानो र नयाँ तरिका को बैठक मानिसहरू सधैं काम गरिरहेको छ । चिनियाँ नयाँ वर्ष लामो छ को लागि एक मौका एकल मान्छे पूरा गर्न एक साथी छ । अधिकांश मानिसहरू यात्रा घर परिवार र साथीहरू समयमा तिहार, जो बीच हुन्छ लेट जनवरी र मध्य-फरवरी, त्यसैले धेरै संभावना पूरा गर्न संभावित साझेदार । तर बैठक एक संभावित साथी गर्न बाटो दिइएको छ. अनलाइन डेटिङ छिटो बढ्दै छ मा, चीन रूपमा अन्य ठाउँमा, र सन्देश अनुप्रयोगहरू यस्तो छन् झन् लोकप्रिय तरिका को रही मानिसहरूलाई थाह छ । चीन डेटिङ बन्ने छ अधिक र अधिक खुला र अधिक र अधिक परिचित तरिका को पश्चिमी देशहरू हालैका वर्षहरूमा मा, भन्छन् जुन ली.
असंख्य तरिकामा जडान संग मिलेर महिला बहुमत छ बाटो मान्छे भेट्न र अदालत मा चीन छ । जुन ली देखि, सूजौ मा प्रांत, चीन मा पूर्व केन्द्रीय कोस्ट, एकल छ र उनको. त्यो याद छ, बढ्दै को संख्या मा पुरुषहरु एकल दृश्य रूपमा आयोजना टोली र भर्ती सार्वजनिक मनोरञ्जन ठाउँ डेटिङ लागि. अन्य मानिसहरू छन् बदल गर्न, मनोवैज्ञानिक र स्टाइलिस्ट आफूलाई बनाउन अधिक आकर्षक छ । र जोगिन देखि प्रश्नहरू खाजिनिति गर्ने आमाबाबुले, केही पनि गर्न राखने नक्कली ब्ययफ्रेंडस प्रस्तुत गर्न आफ्नो आमाबाबुले अनुप्रयोगहरू प्रयोग, यस्तो मलाई किराया प्लाई. रिपोर्ट सुझाव राखने एक प्रेमिका गर्न सक्छन् सम्म खर्च गर्न, युआन (डलर) एक दिन । यो समस्या लागि, मानिसहरू मा एक साथी भेट्टाउने सबैभन्दा तीव्र गरीब ग्रामीण क्षेत्रमा गरे, बुरा गरेर लामो-आयोजित परम्परा भनेर पति हुनुपर्छ प्रदान गर्न सक्षम एक सभ्य स्तर को आर्थिक सुरक्षा अघि, उहाँले गर्न सक्छन् सुरक्षित एक पत्नी । हङकङ यांग, जो छ अब विवाह र, उनको, रूपमा यो वर्णन चीनको आमा-मा-व्यवस्था, अर्थशास्त्र । भने पुरुष विवाहित प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, भविष्यमा आमा-मा-व्यवस्था हुनेछ कि अनुरोध, उहाँले पहिलो किन्छ एक घर छलफल अघि अर्को कदम हो । यो किन एउटा कारण घर मूल्यहरु भएको छ, त्यसैले बलियो हाल को वर्ष मा, त्यो भन्छन् । तर यो आर्थिक बोझ पुरुष मा पनि यो कठिन बनाउने धेरै महिलाहरु को लागि एक साथी पाउन छ । भन्छन् कि मुद्दा संग, को ठूलो संख्या पुरुष, आंशिक किनभने वित्तीय लागत को विवाह छन्, रोजाइका विवाह गर्न पछि । र तिनीहरूले के गर्दा बसोबास, तिनीहरूले अक्सर देख लागि कान्छो महिला । उमेर अंतराल को दुई वर्ष वा अधिक मा साधारण हो, चिनियाँ विवाह. ‘यो कडा महिला लागि उपयुक्त पाउन पछि मानिसहरू तिनीहरू पुग्न वर्ष पुरानो भन्छन्, हङकङ यांग । धेरै योग्य चिनियाँ मानिसहरू विवाह गर्न चाहनुहुन्छ कान्छो र राम्रो बालिका । महिला, बारी मा, हेर्न को लागि वित्तीय स्थिरता, जो तिर वृद्ध मानिसहरू, विशेषज्ञहरु भन्छन् । निस्सन्देह, यो उल्टो पनि हुन सक्छ साँचो हो । राम्रो-शिक्षित र आर्थिक स्वतन्त्र महिला, जो अविवाहित रहने छन् भनिन्छ अनावश्यक बालिका भन्छन्, गर्ने, विवाहित छ, उनको र संघाई जीवित छ । आमाबाबुले एक ठूलो स्रोत दबाव को एक साथी पाउन.
र तिनीहरूले छौं, कहिल्यै-वर्तमान, भन्छन् रोजर झोउ, जो अब विवाह र जीवन मा सूजौ
आमाबाबुले विचार तिनीहरूले जिम्मेवार छन् मदत गर्न आफ्नो वयस्क बच्चा एक परिवार सुरु, उनी भन्छन् । त्यसैले, तिनीहरूले दबाव आफ्नो बच्चा एक साथी पाउन जाने, डेटिङ र तयार गर्न को लागि एक विवाह हो. ‘अन्धा मिति, छ जो व्यवस्थित गरेर आमाबाबुले, अझै पनि धेरै लोकप्रिय छ, भन्छन्, कसले छ र एकल । आमाबाबुले अनुहार ठूलो सामाजिक आलोचना भने आफ्नो छोरी वा छोरा गर्दैन विवाह त सामान्यतया एक केटी आमाबाबुले उत्सुक छन् गरौं आफ्नो छोरी जाने अन्धो मिति मा र विवाह अघि पुगिरहेको छ । त्यसपछि त्यहाँ छन् आउटडोर विवाह बजार । को एक मा देश मा सबै भन्दा ठूलो संघाई, कुना छ जो आमाबाबुले पोस्ट हात-लिखित विज्ञप्ति लागि आफ्नो एकल संग छोराछोरीलाई विवरण यस्तो आय, शिक्षा र व्यक्तित्व । केही आमाबाबुले गर्न ज्ञात गरिएको छ भ्रमण हरेक हप्ता बजार लागि वर्ष संग कुनै सफलता छ । मा पारी कसरी मान्छे भेट्न र कसरी मानिसहरू साझेदार, छ, सबै माथि दिइरहेको, मा एक ठूलो जोड प्रेम भन्दा व्यावहारिक विचार यस्तो आर्थिक सुरक्षा । जुन ली, उदाहरणका लागि, भन्छन् त्यो कुनै हतार मा विवाह गर्न रुचि गर्न को लागि प्रतीक्षा मानिस जो लायक छ, उनको हृदय र प्राण । टिप्पणी गर्न यो कथा मा वा अरू केहि तपाईं मा देखेको बीबीसी राजधानी, कृपया टाउको हाम्रो पेज वा सन्देश ट्विटर मा हामीलाई छ । चीन मा, त्यहाँ एक नाम लागि अविवाहित मानिसहरू भन्दा । शेंग नेन, अर्थ बाँकी पुरुष छन् पाउन अझै एक पत्नी र एक देश मा एक बढ्दै लिङ्ग खाली छ, एक ठूलो समस्या छ । चीन धेरै लाखौं महिला भन्दा पुरुष, एक देश को चीनको एक-बच्चा नीति, जो पल्टाइदिनुभयो थियो, यद्यपि यसको प्रभाव हुनेछ अन्तिम दशक बढी छ । लिङ्ग असंतुलन छ, यसलाई बनाउन लागि कडा धेरै मानिसहरू एक साथी पाउन र यो खाली गर्न संभावना छ, ठूला मनका होओ गर्न । द्वारा, यसको हुनेछ अनुमान लाख महिला भन्दा पुरुष लागि देख एक साथी छ । मा आफ्नो पुस्तक, को डेमोग्राफिक भविष्य, अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री निकोलस शहर अनुमान द्वारा, एक चौथाई भन्दा बढी चिनियाँ मानिसहरू आफ्नो छैन हुनेछ विवाह । अब, टाढा कम महिला भन्दा पुरुष, दौड, एक उपयुक्त साथी पाउन र उनको जीत भन्दा पहिले अरू कसैले गर्छ नेतृत्व छ, केही मानिसहरू जान गर्न ठूलो लम्बाइहरू गर्न एक पत्नी पाउन. तिनीहरूले छौं खर्च विशाल मा रचनात्मक, कहिलेकाहीं असफल, उपाय जीत एक महिला । मा, एक चिनियाँ व्यवसायी मा आफ्नो एक संघाई आधारित भूमिका एजेन्सी को लागि असफल गर्न उहाँलाई पाउन एक पत्नी, भुक्तानी भएको कम्पनी मिलियन युआन (डलर) सञ्चालन गर्न एक व्यापक खोज । अर्को मामला मा, एक कम्प्युटर प्रोग्रामर देखि गुआंगजौ दक्षिणी शहर किनेको को भाग रूपमा एक विस्तृत विवाह प्रस्ताव गर्न आफ्नो प्रेमिका । दुर्भाग्यवश, उहाँले तल फर्केर थियो, आफ्नो रूपमा घटना को फोटो थिए व्यापक साझा मार्फत सामाजिक मिडिया. समस्या को भाग हो भनेर पुरानो र नयाँ तरिका को मान्छे को बैठक छैनन् सधैं काम गरिरहेको छ । चिनियाँ नयाँ वर्ष लामो छ को लागि एक मौका एकल मान्छे पूरा गर्न एक साथी छ । अधिकांश मानिसहरू यात्रा घर परिवार र साथीहरू समयमा तिहार, जो बीच हुन्छ लेट जनवरी र मध्य-फरवरी, त्यसैले धेरै संभावना पूरा गर्न संभावित साझेदार । तर बैठक एक संभावित साथी गर्न बाटो दिइएको छ. अनलाइन डेटिङ छिटो बढ्दै छ मा, चीन रूपमा अन्य ठाउँमा, र सन्देश अनुप्रयोगहरू यस्तो छन् झन् लोकप्रिय तरिका को रही मानिसहरूलाई थाह छ । चीन डेटिङ बन्ने छ अधिक र अधिक खुला र अधिक र अधिक परिचित तरिका को पश्चिमी देशहरू हालैका वर्षहरूमा मा, भन्छन् जुन ली. युवा पुस्तामा छ, अधिक विकल्प र तिनीहरूले तिनीहरूको हृदय निम्न, बरु भन्दा आमाबाबुले. असंख्य तरिकामा जडान संग मिलेर महिला बहुमत छ बाटो मान्छे भेट्न र अदालत मा चीन छ । जुन ली देखि, सूजौ मा प्रांत, चीन मा पूर्व केन्द्रीय कोस्ट, एकल छ र उनको. त्यो याद बढ्दै संख्या पुरुष मा एकल दृश्य रूपमा आयोजना टोली र भर्ती सार्वजनिक मनोरञ्जन ठाउँ डेटिङ लागि. अन्य मानिसहरू छन् बदल गर्न, मनोवैज्ञानिक र स्टाइलिस्ट आफूलाई बनाउन अधिक आकर्षक छ । र जोगिन देखि प्रश्नहरू खाजिनिति गर्ने आमाबाबुले, केही पनि गर्न राखने नक्कली ब्ययफ्रेंडस प्रस्तुत गर्न आफ्नो आमाबाबुले अनुप्रयोगहरू प्रयोग, यस्तो मलाई किराया प्लाई. रिपोर्ट सुझाव राखने एक प्रेमिका गर्न सक्छन् सम्म खर्च गर्न, युआन (डलर) एक दिन । यो समस्या लागि, मानिसहरू मा एक साथी भेट्टाउने सबैभन्दा तीव्र गरीब ग्रामीण क्षेत्रमा गरे, बुरा गरेर लामो-आयोजित परम्परा भनेर पति हुनुपर्छ प्रदान गर्न सक्षम एक सभ्य स्तर को आर्थिक सुरक्षा अघि, उहाँले गर्न सक्छन् सुरक्षित एक पत्नी । हङकङ यांग, जो अब विवाह र, उनको, रूपमा यो वर्णन चीनको आमा-मा-व्यवस्था, अर्थशास्त्र । भने पुरुष विवाहित प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, भविष्यमा आमा-मा-व्यवस्था हुनेछ कि अनुरोध, उहाँले पहिलो किन्छ एक घर छलफल अघि अर्को कदम हो । यो किन एउटा कारण घर मूल्यहरु भएको छ, त्यसैले बलियो हाल को वर्ष मा, त्यो भन्छन् । तर यो आर्थिक बोझ पुरुष मा पनि बनाउने यो कठिन धेरै महिलाहरु को लागि एक साथी पाउन छ । भन्छन् कि मुद्दा संग, को ठूलो संख्या पुरुष, आंशिक किनभने वित्तीय लागत को विवाह छन्, रोजाइका विवाह गर्न पछि । र तिनीहरूले के गर्दा बसोबास, तिनीहरूले अक्सर देख लागि कान्छो महिला । उमेर अंतराल को दुई वर्ष वा अधिक मा साधारण हो, चिनियाँ विवाह. ‘यो कडा महिला लागि उपयुक्त पाउन पछि मानिसहरू तिनीहरू पुग्न वर्ष पुरानो भन्छन्, हङकङ यांग । धेरै योग्य चिनियाँ मानिसहरू विवाह गर्न चाहनुहुन्छ कान्छो र राम्रो बालिका । महिला, बारी मा, हेर्न को लागि वित्तीय स्थिरता, जो तिर वृद्ध मानिसहरू, विशेषज्ञहरु भन्छन् । निस्सन्देह, यो उल्टो पनि हुन सक्छ साँचो हो । राम्रो-शिक्षित र आर्थिक स्वतन्त्र महिला, जो अविवाहित रहने छन् भनिन्छ अनावश्यक बालिका भन्छन्, गर्ने, विवाहित छ, उनको र संघाई जीवित छ । आमाबाबुले एक ठूलो स्रोत दबाव को एक साथी पाउन.
आमाबाबुले विचार तिनीहरूले जिम्मेवार छन् मदत गर्न आफ्नो वयस्क बच्चा एक परिवार सुरु, उनी भन्छन् । त्यसैले, तिनीहरूले दबाव आफ्नो बच्चा एक साथी पाउन जाने, डेटिङ र तयार गर्न को लागि एक विवाह हो. ‘अन्धा मिति, छ जो व्यवस्थित गरेर आमाबाबुले, अझै पनि धेरै लोकप्रिय छ, भन्छन्, कसले छ र एकल । आमाबाबुले अनुहार ठूलो सामाजिक आलोचना भने आफ्नो छोरी वा छोरा गर्दैन विवाह त सामान्यतया एक केटी आमाबाबुले उत्सुक छन् गरौं आफ्नो छोरी जाने अन्धो मिति मा र विवाह अघि पुगिरहेको छ । दृश्य को छवि आमाबाबुले स्काउटिंग को प्रतियोगिता मा विवाह बजार पर्खाल मा संघाई (क्रेडिट:) त्यसपछि त्यहाँ छन् आउटडोर विवाह बजार । को एक मा देश मा सबै भन्दा ठूलो संघाई, कुना छ जो आमाबाबुले पोस्ट हात-लिखित विज्ञप्ति लागि आफ्नो एकल संग छोराछोरीलाई विवरण यस्तो आय, शिक्षा र व्यक्तित्व । केही आमाबाबुले गर्न ज्ञात गरिएको छ हरेक हप्ता बजार भ्रमण वर्ष को लागि संग कुनै सफलता छ । मा पारी कसरी मान्छे भेट्न र कसरी मानिसहरू साझेदार, छ, सबै माथि दिइरहेको, मा एक ठूलो जोड प्रेम भन्दा व्यावहारिक विचार यस्तो आर्थिक सुरक्षा । जुन ली, को लागि उदाहरणका भन्छन्, त्यो कुनै हतार मा विवाह गर्न रुचि गर्न को लागि प्रतीक्षा मानिस जो लायक छ, उनको हृदय र प्राण । टिप्पणी गर्न यो कथा मा वा अरू केहि तपाईं मा देखेको बीबीसी राजधानी, कृपया टाउको हाम्रो पेज वा सन्देश ट्विटर मा हामीलाई छ ।